Geirangerfjord, fjord qurux badan oo lagu duubay The Wave | Wararka Safarka
Mid ayaa uga badan sidii hore filimada musiibada in Mareykanku filim duubo badanaa. Haddii aysan ahayn dhulgariir weyn, waa shisheeyaha, laakiin meteorite, laakiin aafo zombie ah. Mawduucu waa aafada iyo baabi’inta iyo cidkasta oo naftiisa u awoodaysa.
Waa wax cajiib ah markaa dadka reer Norway inay ku dhiiradaan isla filim jilayaal, laakiin filimka ayey ku sameeyeen sidaas Wave. Waxaan ku aragnay tiyaatarada sanadkii 2015-ka qaarkeenna markii dambe ayaan ugu raaxeysanay Netflix, si aan u aragno a masiibo xiiso leh luqad aan Ingiriisiga ahayn. Iyo ugu yaraan dhankeyga, inaan sidoo kale ku raaxeysto muuqaalka quruxda badan ee fjords-ka Noorway.
2 Hirarka iyo tsunami suurtagal ah
3 Booqo Geiranger
Noorway waxay leedahay fjords qurux badan laakiin mid ka mid ah kuwa ugu dalxiiska badan taasi waa taas. Waxay ku taal degmada Romsdal, ee gobolka More, waxayna leedahay qiyaastii 15 kiilomitir dheer adoo waliba ah garab ka mid ah fjord kale, Sunnylvsfjorden iyo midkan oo ka soo jeeda mid kale oo weyn, Storfjorden ah.
Ilaa 2005 waa Dhaxal Adduun, sharaf ay la wadaagto fjord kale oo dhow. Waxay leedahay biyo dhacyo cajiib ahs sida caanka ah Toddoba Walaalo ah Waterfall. Kuwani waa toddoba durdur oo kala duwan oo sameeya toddobo biyo-dhac, oo kuwa ugu sarreeya ay gaarayaan 250 mitir. Waxay u leeyihiin magacan quruxda badan maxaa yeelay halyeeyo ayaa ku cuslaanaya iyaga oo ka sheekeynaya toddobo gabdhood oo walaalo ah oo ku cayaarey buurta hoostooda halka ay ka koreynayeen. Biyo-dhac kale oo caan ah ayaa ah Biyo-dhaca Monk. Labaduba way is hor fadhiyaan.
Fjord waxay ku wareegsan tahay darbiyo aad u dhaadheer oo fiiqan oo badda gacanteeda ayaa aad u cidhiidhi ah sidaa darteed isku dhafka ayaa ah mid xad dhaaf ah. Haddii aan ku darno biyo-dhacayaasha halkan iyo halkaas waa wax cajiib ah. In kasta oo waqtiyadii kale dadku halkan degeen, in beeraha buuraha iyo tuulooyinkaMaanta qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa la dayacay.
Qaarkood waxaa lagu gaari karaa lugo, dalxiisyadan bannaan in noorwiijigu aad u jecelyihiin, ama doon. Socodyadu waa kuwo khatar ah maaddaama aysan jirin buundooyin, waddooyinkuna badiyaa waxay ku dhegan yihiin buuro dhaadheer oo aad u sarreeya. Qaar ka mid ah kuwa badanaa la soo booqdo xagaaga waa Knivsfla, Blemberg ama Skagefla. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira markab xamuul ah oo u adeega marin dalxiis oo ku teedsan inta u dhaxeysa laba degsiimood oo yar sida Geiranger iyo Hellesylt.
Hirarka iyo tsunami suurtagal ah
Wixii intaas dhaafsiisan Mawjaddu waa filim ku saleysan dhacdooyin dhici kara. Xaqiiqdii, dhacdo run ah ayaa dib looga sheekeeyay bilowgii dhacay Abriil 1934. Kadibna dhagaxa ka soo rogmaday buurta wuxuu saameyn ku yeeshay Tsunami oo baabi'isay tuulada Tajford oo ay ku dhinteen 40 qof ka horna, horaantii qarnigii labaatanaad, wax la mid ah ayaa dhacay. Xaqiiqdii, marwalba waa macquul inay mar kale dhacdo.
Runtu waxay tahay tuulada yar ee Geiranger, oo ah meel dalxiis loo tago, waxaa laga dhisay dhamaadka fjord ee webiga Geirangelva. Buurta Akerneset ee ku sii socota fjord Waa la kormeerayaa marwalba, sida aan ku aragno filimka, maxaa yeelay haddii ay burburayso, waxaa hubaal ah inay soo saari doonto tsunami weyn oo baabi'inaysa hal magaalo laakiin dhowr ku baaba'aysa 10 daqiiqo oo keliya.
Buurta wuxuu leeyahay dillaac ballaadhiyaa heer ilaa laba illaa 15 sintimitir sannad kasta mana joojinayaan inay isku dayaan inay xisaabiyaan sida ay noqon karto, goorta iyo cawaaqibka la filan karo haddii 1500 oo mitir oo buuro ah ay ka soo baxaan fjord.
Juquraafiyayaashu waxay ku qiyaaseen haddii dhul-gariirku dhaco inay noqonayso qiyaastii 50 milyan oo mitir kuyuubik (laba jeer labada dhul-go 'ee qarnigii XNUMX-aad): dhagaxyada ku dhaca biyaha fjord-ka waxay sababi doonaan mowjado aad u weyn, tsunami, oo qiyaastii 30 mitir ah taasi waxay baabi'ineysaa xeebta oo dhan horumarkooda.
Koox dhismeyaal ah oo meel fog laga arki karo ayaa wax muuqda leh, waana taas markii hore waxaa jiray beer halkan maanta laga tago. Goobtu waa mid layaab leh oo waala xafiday maxaa yeelay waxay u taagan tahay wax u eg nolosha adag ee fjords, laakiin runta ayaa ah in goobta ay tahay mid cabsi badan: waxay ku xanuuntaa kaliya biyaha, waxay kaliya 100 mitir ka sarreysaa heerka badda iyo dusha sare dhaadheer oo u nugul daadadka qulqulaya ... Inkasta oo kuwa wax dhisa ay tixgeliyeen isla markaana la fiirsaday sida ay saqafyada dhismuhu ugu kala dheereeyaan dhaadheer si buuraley suuragal ah ay uga dhex dusto, weli waa cabsi .. .
Dhammaantood waxay ku darmayaan filim musiibo ah sidaa darteed mid ka mid ah filimadii ugu dambeeyay ee Noorwey ku dhufta ayaa dhashay (xitaa waxaa loo xushay in loo soo bandhigo Filimka Ajnabi ee ugu Fiican Oscar-ka…). Filimka waxaa lagu duubay Geiranger iyo qaybta gudaha ee istuudiyaha Romania. Maalgashigu wuxuu ahaa ku dhowaad lix milyan oo yuuro ah oo haddii aan u malayno in Norway ay ku iibisay 30% tikidhada filimada ka badan Jurassic World… waa guul
Hadaad jeceshahay filimka xagaagan waxaad dalxiis ugu tagi kartaa fjords-ka Norwey. Dekedda Geiranger waa dekedda saddexaad ee ugu weyn dalxiis ee Norway iyo muddada afarta bilood ah ee dalxiiska ay ka hesho 140 illaa 180 markab.
250 qof ayaa ah dadka deggan goobta laakiin xagaaga in kabadan 300 kun oo dalxiisayaal ah ayaa yimaada bilahaas diirran. Waxaa jira dalab deegaan oo kaladuwan, labadaba shan huteel xiddig sida xero, markaa waxaad dooran kartaa meesha aad seexato sida jeebkaagu yahay. Sideed ku tagtaa carceero markab dalxiis waa ikhtiyaar: Hurtigruten waa goob xeebeed oo isku xirta Bergen iyo Geiranger.
Sidoo kale waad imaan kartaa Diyaarad ahaan ka yimaada wadanka oo dhan ama bas kaga yimaada Bergen, Oslo ama Trondheim. Sidoo kale tareenka waad ka raaci kartaa Oslo inkasta oo safarku ku dhow yahay lix saacadood. Laga soo bilaabo Trondheim wax yar ayey kaa qaadaneysaa laakiin had iyo jeer waa inaad baska ka raacdaa wadada buurta si aad ugu dambeyntii halkaas u gaarto Iyo waa maxay howlaha dalxiis ee aad sameyn karto?
Hagaag waad awoodaa kayaking, catamarans dhakhso leh oo wareerinaya, socdaal lug ah, raac doonyo oo ku raaxee qorraxda woqooyiga yurub ee dhalaalaysa dhalaalkan xagaaga. Waxaana mudan in la dhaho, waa meel la tagi karo daqiiqad kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Norwey » Geirangerfjord, fjord qurux badan oo lagu duubay The Wave
Waxaan rajeyneynaa inaysan u dhicin sidii musiibadii Vajont Dam ee Talyaaniga, filimku waa wax aad u badan wixii dhab ahaan halkaas ka dhacay.
10 ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan adduunka 2017
Calanque D'En Vau, oo ku taal duleedka Marseille